ကားတစ်​စီးဝယ်​​တော့မယ်​ဆိုရင်​ ဘာ​တွေ ကြည့်ရမလဲ။
⃣ မကျွမ်းကျင်​​သေးတဲ့သူ​တွေ အတွက်​ အ​ခြေခံ​လေး​တွေပါ။ ကားနားလည်​တဲ့သူကိုလည်း​ ခေါ်သွားရင်း ကိုယ်​လည်း ဒါ​လေး​တွေစစ်​ကြည့်​ပါ။
⃣ ကားမှာအ​ရေးအကြီးဆုံးက အရှုပ်​အရှင်းကင်းပြီး လိုင်​စင်​ပါတဲ့ကားဖြစ်​ဖို့ပါ။
အုံနာဘုတ်​ ဝှီးတပ်​ မှန်​ / မမှန်​
ချက်​စီ (Chassis) ​ဘောင်​ နှင့်​ မိန်းပလိတ်​ပြား ဖြတ်​ဆက်​လုပ်​ထားလား ဆိုတာ ​သေချာ​အောင်​ ကညနရုံးမှာ ကားမဝယ်​ခင်​ သွားစစ်​ပါ။ မှတ်​ပုံတင်​ပြပြီး တရားဝင်​စစ်​တာ ​ငွေငါး​ထောင်​​ပေးရပါတယ်​။ ကားမှာ အလိမ်​​တွေပါရင်​​တော့ ကားသိမ်းခံရပြီး လူပါအမှုဖြစ်​မှာပါ။
ဒါက​တော့ ကားကိုကြည့်​ပြီး အားလုံးကြိုက်​လို့ ​ဈေးပါတည့်​ပြီးမှ final အ​နေနှင့်​ လုပ်​ရမှာပါ။
⃣ ကားတစ်​စီးဝယ်​ဖို့ သွားကြည့်​ရင်​
☑ ၁။ အင်​ဂျင်​ခန်း ကြည့်​မယ်​ ။
ကားရဲ့အရိုးအစစ်​လို့​ခေါ်တဲ့ အဓိက တန်း​တွေ Frame ​တွေကြည့်​ပါမယ်​။
ရေတိုင်​ကီတန်း​တွေ ဘေး​ဘောင်​​တွေ ​ရှော့ဘား​ဘောင်​​တွေ ​သေသပ်​ရမယ်​။
အင်​ဂျင်​ ဂီယာ​ဘောက်​စ်​ အားလုံးကြည့်​​ကောင်း​ နေရမယ်​။
​Original Spot​ တွေ ချိတ်​​တွေဖြစ်​ရမယ်​ ။
ဘောနပ်​​အောက်​က ​ချိတ်​​တွေ​ ​ဆေး​တွေ မှန်​​ရမယ်​။
(Original ဟုတ်​မဟုတ်​သိရန်​ နားလည်​တဲ့သူလိုပါသည်​)
☑ ၂။ စက်​နှိုးမယ်​ ။ AC ဖွင့်​မယ်​။
အင်​ဂျင်​သံနား​ထောင်​မည်​။ အသံ​ကောင်းလား ငြိမ်​လား။ လီဗာ​ဖြေး​ဖြေးနင်းကြည့်​မယ်​ RPM တက်​တာမှန်​လား။
AC ​အေးလားကြည့်​မယ်​ ။
ပါဝင်​တဲ့ စနစ်​​တွေအလုပ်​လုပ်​လား စမ်းမယ်​
( ဥပမာ Auto Swing )
အင်​ဂျင်​ဝို​င်​ထည့်​တဲ့အဖုံး ဖွင့်​ကြည့်​မယ်​။ အင်​ဂျင်​ဝိုင်​ ဂျိုး​တွေရှိ​နေမယ်​ဆို အင်​ဂျင်​ cleaning လုပ်​ရမှာ။
☑ ၃။ ကားတစ်​စီးလုံး ပတ်​လည်​ ​အော်​​ဆေးလား လိုက်​ကြည့်​မယ်​။ တံခါး​တွေဖွင့်​ပြီး တံခါး​ဘောင်​​တွေ အချိုးတွေ အရိုးအစစ်​​တွေ သပ်​ရပ်​လား ကြည့်​မယ်​။ ​အော်​​ဆေးလားသိဖို့က ခက်​ပါသည်​။ သို့​သော်​ ​ဆေးသားအ​ရောင်​လွဲတာ မညီတာ ​လှိုင်းေ​တွလိုမျိုး ဖြစ်​​နေတာ ​အရိုးအစစ်​ ​တွေမညီတာ​တွေက ​သေချာကြည့်​ရင်​ မြင်​ရပါသည်​။ ကားတစ်​စီးလုံးမှာ ချိတ်​​တွေ spot ​တွေရှိပါတယ်​။ အဲဒါ​တွေက ထိခိုက်​မိရင်​ ​အော်​အတိုင်း ပြန်​လုပ်​ဖို့မလွယ်​ပါဘူး။ တစ်​ခုခုကို သံသယရှိတယ်​ဆိုရင်​
ဘယ်​ဘက်​နဲ့ညာဘက်​ တစ်​ဖက်​နဲ့တစ်​ဖက်​ တူလားကြည့်​ပါ။ ​တံခါး​တွေဆေးပြန်​မှုတ်​ထားတယ်​ထင်​ရင်​ ​ခေါက်​ကြည့်​ပါ။ သံပြားအသံလား ပတ်​တီး အသံလား နား​ထောင်​ပါ။
☑ ၄။ ​နောက်​ဖုံးဖွင့်​မယ်​။ ချိတ်​​တွေမှန်​ရမယ်​။ အတွင်းခန်း​​ အော်​ဆေးဖြစ်​ရမယ်​။
☑ ၅။ ​အောက်​ပိုင်းကြည့်​မယ်​။ သံ​ချေးအ​ဆွေးရှိလား။
ဖရိန်​​တွေ​တန်း​တွေ ကြည့်​​ကောင်းလား။ ​ကွိုင်​စပရိန်​​တွေ ရှော့ဘား​တွေကြည့်​မယ်​။
☑ ၆။ မီးလုံး​တွေ original အမှန်​​တွေလား။ မှန်​​တွေလိုက်​စစ်​မယ်​ ။ ​အော်​မှန်​​တွေလား ။ ပြန်​ထည့်​လား။ မှန်​တံဆိပ်​​တွေ ပြန်​ရိုက်​ထားတဲ့ဟာ​တွေလား။ မှန်​​ဘေးလိုင်​နာ​တွေ ​သေသပ်​လား။ မှန်​အကွဲ အက်​ရာရှိလား။
☑ ၇။ အတွင်းခန်းကြည့်​မယ်​။ စီလင်​ ဒက်​ရှ်​ဘုတ်​ ထိုင်​ခုံ ​ဘေးကာဗာ​တွေ အ​ခြေအ​နေ။ စတီရာရင်​ ဂီယာ အမှန်​လား။ ကားမှာပါတာ​တွေ အကုန်​စစ်​ ( TV ထိုင်​ခုံ​မော်​တာ seat-heater seat-memory TRC ECO )
☑ ၈။ Original Alloy လား။ ပြန်​ထည့်​လား။
☑ ၉။ Model Year ကို internet မှာစစ်​ပါ။
ကား color code ကိုမှန်​လား google မှာရှာပြီးစစ်​ပါ။
( တစ်​စီးလုံး အ​ရောင်​​ပြောင်း​တွေရှိတတ်​လို့ )
​​ပြောထားတဲ့ ကား Grade ပြည့်​လား။
Grade change ထားလား။
( ဥပမာ Wish 2003 XS ဆိုပြီး အ​နောက်​ဘရိတ်​က Drum ဖြစ်​​နေတာမျိုး )
☑ ၁၀။ ခွင့်​ပြုတယ်​ဆို ကားစမ်း​မောင်းကြည့်​မယ်​။ AC ဖွင့်​ထားမယ်​။ အင်​ဂျင်​အသံ ​အောက်​ပိုင်းအသံ နား​ထောင်​မယ်​။ ချိုင့်​အ​သေး​လေး​တွေကျရင်​ ဘယ်​လိုလဲ။​ ​​ရှော့ဘား​တွေ ဘွတ်​​တွေ​ကောင်းလား။ ဘရိတ်​​ကောင်းလား စမ်းမယ်​။ ​မော်​ဒယ်​မြင့်​ကားဆို ကိုယ့်​အသိ workshop မှာ computer ထိုးစစ်​မယ်​ ( ဥပမာ Honda Civic hybrid မှာ IMA error လိုမျိုးရှိမှာ​ကြောက်​ရင်​ )
🇲🇲 ကားများသည်​ brand new ကားများမဟုတ်​လို့ အနည်းအများ ပြစ်​ချက်​ရှိမှာပါ။ ​ဈေး​ပေါ်မူတည်​ပြီး ဝယ်​သင့်​ မဝယ်​သင့်​ဆုံးဖြတ်​ပါ။ အချို့လူများသည်​ ကားအားလုံး​ကောင်း​ပြီး​ ဈေးတန်​သော်​လည်း ဘန်​ဘာ တွင်​​အဆင်းရာများရှိ၍ မကြိုက်​ဟု​ပြောသည်​။ ထို့​နောက်​ အ​ရှေ့​ရော အ​နောက်​ပါ တိုက်​ထားပြီး ​ဆေး body ပြန်​လုပ်​ထား​သောကားကို စင်းလုံး​ချောထင်​၍ ဝယ်​သွားသည်​ကို ကြားဖူးသည်​။
kilo 120000 ကားကို ကီလိုများသည်​ဟု မဝယ်​ဘဲ kilo 180000 ကို ကီလို 70000 ​ပြောင်းထား​သော ကားကိုဝယ်​သည်​။ ကီလိုအနည်းအများ အ​ရေးကြီး​ သော်​လည်း အင်​ဂျင်​ ဂီယာ​ဘောက်​စ်​ ​အောက်​ပိုင်း ပို​ကောင်းတဲ့ကားကို ယူရပါမည်​။
ကီလိုနည်းပြီး ကား​ကောင်းရင်​​တော့ အကောင်းဆုံး​ ပေါ့။
🇲🇲 သိသ​လောက်​ မှတ်​သ​လောက်​ ​​လေး​တွေတင်​​ပေးလိုက်​ပါသည်​။ ကျန်​ခဲ့တာ​တွေလည်းရှိမှာပါ​။
Posted by Alex Aung at 1:52 AM
အနိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေ ၄၈၀၀ ကိစ္စအပေါ် အကြံပြုပါရစေ!
ချဉ်ပေါင်သီးနှင့် ဝက်သားအစပ်ဟင်း ~ အပ်မိူ ချဉ်စပ်...
ဘာလို့ Out of Tune (ကီးချော်) ရတာလဲ??
အလုပ်ရချင် CV ပြင် (အစ - အဆုံး)
ပေါင်ခြံယားခြင်း (Joint Itch)
လေဘာတီမမြရင် ( ၁၉၀၄ - ၁၉၄၅ )
ခါးသေးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ???
ကော်ဖီပေါင်မုန့် ပူတင်း ~ ချိစ်ပြောင်းဖူးလက်ဖက်သု...
ဆယ်သွယ်ပြောဆိုခြင်း အနုပညာ (Communication Skills)
မြန်မာ့ကြယ်ပဲပင် (Sacha Inchi Nuts)
ပေါင်ခြံ အတွင်းကြားမဲခြင်းကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်...
Inhalant abuse လမ်းဘေး ဆေးရှူ
အသံထွက်ဝတ္ထုများ (Audio Books)
၀က်သား (Pork ) အထူးပြု စားစရာအချို့
Career Planning အကြောင်း
Hip Hop လောကထဲဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်
၂၀၂၀ မှာဘယ်သူ့ ကိုရွေးကြမလဲ
"ဝ" ရိုးရာဆန်ပြုတ် _ ယိုးဒယားကြက်ဆီထမင်း _နတ်သုဒ္ဓါ
ဆောင်းတွင်းမှာ ဘာလို့မနက်စောစော ထပြေးသင့်တာလဲ
PQ - IQ - EQ - SQ - CQ
ယိုးဒယား ဝက်သားပြားကင် - လက်ဖက်အသားလုံးကြော်မွှေး...
အဆီပို​တွေကို ​လောင်​ကြွမ်းဖို့ ဘယ်​လို​လေ့ကျင့်​...